UK oo la wareegtay Hoggaanka ilaalinta Xeebaha Soomaaliya+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA UK oo la wareegtay Hoggaanka ilaalinta Xeebaha Soomaaliya+Sawirro
UK oo la wareegtay Hoggaanka ilaalinta Xeebaha Soomaaliya+Sawirro
Jabuuti(SONNA):– Dowladda Britain ayaa si rasmi ah ula wareegtay hoggaanka ciidamada Midowga Yurub ee ilaaliya xeebaha dalkeena Soomaaliya.
Munaasabad lagu qabtay Markab kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dowlada talyaniga oo ku sugan xeebaha dalka Djibouti ay dowladda Britain kula wareegtay xilkaasi,sida uu ku soo waramayo Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee dalka Jabuuti Makahiil Rashiid Barre.
Hoggaanka ciidamada Midowga Yurub ee ilaaliya xeebaha dalkeena Soomaaliya ayaa waxaa horay u hayay ciidamada badda ee dowladda Talyaniga, iyadoo taliyihii xilkaasi wareejiyay uu sheegay in sanadkii la soo dhaafay ay ciidamada la dagaallanka burcad badeedda ay xeebaha Soomaaliya ka soo qabteen ilaa 6 burcad badeed ah oo ay ka qabteen agagaarka xeebaha Puntland.
Wuxuu sheegay in si aad ah hoos ugu dhaceen weeraradii kooxaha Burcad badeeda ay ka geysan jireen xeebaha Soomaaliya iyo goobaha ka baxsan.
6-biloodba mar ayaa hogaanka ciidamada Midowga Yurub ee ilaaliya xeebaha dalkeena waxa la wareega mid ka mid ah dowladaha Midowga Yurub ee ay ciidamadu ka joagaan xeebaha Soomaalia.
Ilaalinta Xeebaha Soomaaliya ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa si KMG ah uga caawiya Wadamada Midowga Yurub,waxaana hadda Dowladda dadaal ku bixineysaa sidii loo tayeyn lahaa Ciidamada Badda Soomaaliya si ay ula wareegaan mas’uuliyadda amaanka Xeebaha dalka.
Previous articleWasiir Yariisow oo ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay geerida Gaduudo Carwo
Next articleShacabka Dhuusamareeb oo soo dhoweeyay Heshiiskii Maamulada Galmudug iyo Ahlu-suna